Indawo yokukhempisha sinombuki zindwendwe onguAmy & Richard
I-Rustic Camping kwiFama yaseRoyer Valley: Ifama imi kwiinduli zeWaldo County. Sibekwe ngokulula phakathi kweBelfast kunye neUnity Maine. KwiFama yaseRoyer Valley sifuya iihagu, inyama yenkomo, iigusha, iibhokhwe, iinkukhu, amaqanda kunye nemivundla. Kwakhona kwifama yethu uya kufumana iiponi ezimbini eziyilwayo, idonki encinci kunye nenja, uZephyr uyi-1/2 yeGolden Retriever kunye ne-1/2 yePyrenees enkulu. Ifama ineehektare ezingaphezu kwama-50 zamaplanga kunye namadlelo anokuhlolwa ziindwendwe zethu kwaye zisetyenziselwe ukumisa inkampu.
I-Rustic Camping kwiFama yaseRoyer Valley:
IFama yaseRoyer Valley:
Ibekwe kwiinduli zeWaldo County Maine kwidolophu encinci yaseBrooks, eMaine, sibekwe ngokulula phakathi kweBelfast kunye neUnity Maine kunye nokuhamba ngokulula ukuya kwenye indawo ethandwayo ejikeleze ilizwe.
• Inyama yenkomo
• Iinyosi zobusi
•	Imaple syrup
• Amaplanga eenkuni kunye namaplanga
Ezinye Izilwanyana & Nezilwanyana Zasekhaya:
Iindwendwe zethu ziya kufumana iiponi ezimbini eziyilwayo, uMeyi & Grace, idonki encinci, uNoel kunye nerhanisi lakhe lesilo-qabane, uPat. Sinenja enye ehlala endlwini yethu kunye nathi, uZephyr yinkwenkwe entle emnyama eyi-½ Great Pyrenees & ½ Golden Retriever. Ulilungu lentsapho yethu yaye uhlala enathi naphi na apho siya khona.
Sithengisa iiprotheyini ezivela kuyo yonke imfuyo yethu edweliswe ngasentla, amaqanda, kunye nezinye iimveliso apha efama kunye nokuzisa ekhaya. Zonke iimveliso ziyafumaneka ukuze zithengwe ziindwendwe xa ziceliwe. Uninzi lweendwendwe zethu zizisa ii-coolers ezongezelelweyo zokuthengwa kwemveliso yethu yasekhaya. Ukuba awunayo into yokupholisa nawe singakunika enye.
Ukhathalelo lwezilwanyana kunye nentlonipho ngomhlaba:
IFama yaseRoyer Valley isoloko iyifama kuqala. Sivumela impahla yethu kunye nezilwanyana ukuba kwabelwane ngazo ziindwendwe zethu kunye nabathengi basefama. Nceda yazi ukuba izilwanyana zethu kufuneka zihlonitshwe ngamaxesha onke. Ngalo lonke ixesha gcina izilwanyana zasekhaya ngaphandle kweendawo zemfuyo. Akukho lundwendwe okanye isilwanyana sasekhaya siya kubaleka, sileqe, okanye sixhaphaze ngayo nayiphi na imfuyo, izilwanyana, okanye izilwanyana zasekhaya. Umhlaba wethu wathengwa ngu-Amy noRichard Royer, Omnci. ngomhla woku-1 kuSeptemba wowama-2016 emva kwexesha elingaphezu konyaka bephantse bangenamakhaya. Ngobabalo lukaBawo oseZulwini, Usikelele ngobugosa beliqhekezana lesidiliya Sakhe emhlabeni. Njengoko kukhathalelo nentlonipho yezilwanyana zethu sikwafuna okufanayo ngomhlaba esiwuhambayo emoyeni esiwuphefumlayo, namanzi esiwaselayo. Akukho kutshiswa kweeplastiki okanye enye inkunkuma, ukulahla iikhemikhali, i-oyile okanye igesi naphina kwipropati. Akukho nkunkuma, musa ukushiya i-diapers ezilahlayo, izinto zococeko lomntu, okanye ezinye izixhobo zomntu ezilahlayo naphi na kwipropati. Ezi zenzo aziyi kunyanyezelwa kwaye zinokukhokelela ekususweni kwakho kwipropati nangaliphi na ixesha. Hlala ulahla inkunkuma yakho kwi-trashcan okanye uyisuse kwipropati xa uphuma
Ifama ihleli ecaleni kwenduli enamadlelo athambekileyo kunye neehektare ezininzi zehlathi zonke zifumaneka kwimisebenzi yokukhempisha ixesha elininzi. Sivula unyaka wonke ukuba sikhempise kunye neminye imisebenzi. Sithanda ukufumana iinyawo ezininzi zekhephu kwiinyanga zasebusika. Nangona kunjalo, siyakwamkela nabani na ongathanda ukwenza inkampu yasebusika ukuba acinge ngokuhlala nathi, singavuya ukukwamkela. Sineendawo ezininzi zokumisa iintente zabantu; ezinye ziyafikeleleka ngemoto, ezinye iindawo undwendwe luya kufuna isithuthi esiqhutywa ngamavili amane, ezinye iindwendwe zikhetha ukunyuk' intaba ukuya kwindawo yazo ekhethekileyo yokukhempisha. Inxalenye yobuhle bokuhlala nathi kukhetha indawo yakho ekhethekileyo yokumisa inkampu. Zinike ixesha elongezelelweyo elincinane lokujonga macala onke ukuze ufumane indawo yokukhempisha okanye ukuba ufuna nje ukuseta indawo elula sinokukunceda ngaloo nto ngokunjalo. Abanye abantu bafika emva kwexesha kakhulu bagqibe kwelokuba bayeke ukumisa intente kwaye balale kwimoto yabo ngobusuku nantoni na okhululeke ngayo ilungile. Yiza ujonge ifama yethu kwaye wonwabele ipropathi esisikelelwe ngayo kwaye siyathanda ukwabelana nabantu abavela kwihlabathi liphela.
Ukugcina indawo yeKampu:
Nceda yazi zonke iinombolo zenkampu kwifama yethu ziyatshintsheka. Umzekelo: Ujonge kwizintlu zethu kwicandelo lobhukisho lika-Airbnb kwaye uthanda iCampsite #1. Kodwa iCampsite #1 ibhukishelwe iintsuku ofuna ukuhlala. Nceda vele ubhukishe inkampu elandelayo evulekileyo njengeCampsite #2. Amanani akanamsebenzi ngokwenene. Ukuba uyawuthanda umfanekiso othunyelweyo nceda usazise kwaye ndiya kuzama ukubamba le ndawo. Iindwendwe ezibuyela ezinkampini ukuba uyonwabele indawo obuhlala kuyo kutyelelo lwakho lokugqibela nceda usazise kwaye ukuba akukho mntu uyigcinileyo loo ndawo siya kukubambela yona.
Zonke iziza zethu zokukhempisha zi-rustic azinamanzi, umjelo ophantsi komhlaba ohambisa amanzi amdaka, okanye i-hookups yombane. Ukuhlamba kwenziwa kwindlu yangaphandle. Silindele ukuba indawo yendlu yangaphandle igcinwe icocekile ngamaxesha onke ukwenzela ukhuseleko lwakho kunye nolwezinye iindwendwe. Kubonelelwe ngephepha lendlu yangasese, isibulali ntsholongwane, izinto ezihlaziya umoya, uthuli lwekalika, isicoci sesandla, kunye neetawuli zephepha.
Umgaqo-nkqubo weNkampi kunye noLwazi:
Siza kuqondisa zonke iindwendwe apho banokuseta khona iinkampu zabo.
ICampsite nganye inezithuthi ezibini kwisiza ngasinye zonke ezinye kufuneka zipake kwindawo echongiweyo yokupaka ngefama.
Abantu aba-5 ngokubhukisha kunye nemirhumo eyongezelelweyo ehlawulwayo ngexesha lokubhukisha.
Izilwanyana zasekhaya nazo zivumelekile ukuba undwendwe kufuneka lusazise ngazo naziphi na izilwanyana zasekhaya eziya kukhapha ngexesha ubhukisha ngalo. Imirhumo iya kuhlawulwa ngesilwanyana sasekhaya ngokuhlala. Nceda ujonge ipolisi yethu yesilo-qabane.
Sinciphisa izixhobo zokukhempisha kwintente enye okanye inkampu kwindawo nganye.
Iintente ezongezelelweyo zingongezwa kwindawo yokubeka intente nge-$25.00 ngentente eyongezelelweyo ngobusuku.
IiRV kunye neTrailer yeCamper: aka "Campers"
Bonke abahlali beenkampu kufuneka babe nendawo eyahlukileyo.
Jonga nathi ngaphambi kokuba ubeke indawo ukuze uqiniseke ukuba sinenqanaba lendawo okanye enkulu ngokwaneleyo kwinkampu yakho ethile.
Iintente ezongezelelweyo zingongezwa kwindawo yokubeka inkampu kwi-$ 25.00 ngentente eyongezelelweyo ngobusuku. Qonda ukuba undwendwe oluhlala kwinkampu lufike neentente ezingaphezulu kwesinye kuya kufuneka bahlawule intente eyongezelelweyo phambi kokulala ngobo busuku kwaye iinombolo zeendwendwe zenkampu ziyasebenza.
Musa ukushiya nayiphi na inkunkuma kwindawo yenkampu phantsi okanye kumakhonkco omlilo.
Musa ukutshisa nayiphi na iplastiki, iglasi, irabha, okanye isinyithi. Ukuba ukhetha ukutshisa inkunkuma yokutya nceda uqinisekise ukuba umlilo uyitshisa ngokupheleleyo imveliso phambi kwekhefu.
Sinemigqomo yenkunkuma esekwe kumnyango weFama wevenkile yokungena inkunkuma kunye neebhotile zediphozithi.
Yonke imililo yenkampu kufuneka igcinwe kumakhonkco omlilo amiselweyo kwindawo yakho yokukhempisha kwaye ungaze ushiywe ungajongwanga. Amakhonkco omlilo akufuneki afuduselwe kwenye indawo!
Yonke imililo kufuneka icinywe phambi kokuba ushiye inkampu yakho ingajongwanga kwaye uphume
Sinikezela ngemenyu ye-A La'Carte yokuRenta yezixhobo zokukhempisha kwezo ndwendwe zingathanda ukumisa inkampu kodwa zingenazo izixhobo zazo. Zonke izinto ezirentwayo kunye nezibonelelo mazicelwe phambi kwentsimbi yesi-6:00pm ngexesha lasempuma. Zonke iirenti zongezwa kwimirhumo yokurenta yenkampu. Umrhumo uya kuhlawulwa ngaphambi kokuba uhlale nge-Airbnb, ikhadi letyala, okanye imali. Iindwendwe kufuneka zamkele zonke iintlawulo ukuba zenziwe ngo-Airbnb ngaphambi kokuba zifumane le nkonzo okanye zihlawulele zonke iinkonzo kum ngaphambi kokuba zihlale okanye zifumane iinkonzo okanye iimveliso. Ngesicelo sakho siya kuseka zonke izixhobo zakho zokurenta kwaye sizilungiselele ngaphambi kokufika kwakho kwaye siya kuthoba xa sele uphumile, ungawushiya umsebenzi kuthi kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho efama.
Iinketho zokuRenta iLa'Carte:
Intente yomntu o-1 - 2 (80”dx80”wx36”h iquka ukuseta nokususwa) $75.00 ngosuku
1 - 6 Person Tente (120”d x 104”w x 80”h iquka ukuseta nokususwa) $100 ngobusuku
Summer Weight Sleeping Bag $10.00 ngosuku
Heavy Sleeping Bag $20.00 ngosuku
Sleeping Pad Rhoqo $10.00 ngosuku
IZIXHOBO ZOKUSHAMBA: (Makube lucwangciswe kwangaphambili phambi kokusetyenziswa)
Ishawa Fee Camping Iindwendwe $10.00 ukusetyenziswa ngalinye
Bath Towel Rental $10.00 ngalinye
Umrhumo wediphozithi yetawuli yokuhlambela $ 5.00 nganye ibuyiselwe ukuba itawuli ibuyiswe ikwimeko entle.
•25 quart Cooler $10.00 ngosuku
•Camp wabona $ 5.00 ngeyure
•Ifosholo $ 5.00 ngeyure
•Iron tooth rakeke $ 5.00 ngeyure
• Igqabi irake $ 5.00 ngeyure
•Camp Chair $10.00 ngosuku
INKONZO YOKUCWELA IKHAMPISI:
Inkonzo yokuseta inkampu ye-Royer Valley Farm i-$ 75.00 Zonke izixhobo zakho zokurenta kwaye zilungele wena ngaphambi kokufika kwakho kwaye zithathwe phantsi nje ukuba uphume, ushiye umsebenzi kuthi kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho. Ihlawuliswa ngentente nganye
INKONZO YOKUQALISA UMLILO WENKAMPANI:
Siza kuqalisa umlilo wakho wenkampu kwaye uhambe umrhumo we-$45.00. Nje ukuba ihambe ixhomekeke kundwendwe ukuba iqhubeke.
Sifuna ukuba yonke imililo yenkampu igcinwe kwindawo ekhethiweyo yomlilo kwindawo yokukhempisha. Kwaye ungaze ushiywe ungajongwanga yonke imililo kufuneka icinywe phambi kokuba ushiye indawo yakho yenkampu ungajongwanga kwaye uphume.
Firestarter Kit 1: Iphepha, ukubasa $ 8.00
I-Firestarter Kit 2: Iphepha, ukubamba, kunye ne-lighter $ 10.00
iinkuni: $1.00 intonga nganye okanye intonga 11th for $10.00
Iindwendwe zaqokelela iinkuni kumgangatho wehlathi: Mahala
*Akukho nkuni ziphuma kurhulumente zivumelekileyo kwipropati yethu
* Iindwendwe azivumelekanga ukuba zigawule nayiphi na imithi ephilayo okanye ibhrashi kwaye akufuneki zishiye naziphi na iintonga ezijikeleze inkampu emva kokujonga ngaphandle. Iinkuni ezipakishwe kakuhle ecaleni komgca womthi nangaphandle kwedlelo kulungile.
*Nayiphi na imithi ephilayo eyonakeleyo undwendwe luya kuthwaliswa uxanduva lwezimali.
*Yonke imirhumo eyongezelelweyo kufuneka kuvunyelwane ngayo xa ubhukisha kwaye kufuneka ihlawulwe ngaphambi kokuhlala kwakho.
*Intlawulo inokwenziwa ngo-Airbnb, ngekhadi letyala, okanye ngemali
Ngena kwaye uqhube ungashiyi nayiphi na inkunkuma okanye inkunkuma naphi na efama.
*Zonke iimali zokurenta kunye nokubonelela zinokutshintshwa ngaphandle kwesaziso.
Umbuki zindwendwe ngu- Amy & Richard
Sifumaneka ixesha elininzi njengoko sihlala kwaye sisebenza apha efama. Xa singekho ekhaya sinokufumaneka ngeselfowuni okanye ngesms
UAmy & Richard yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brooks